qaabka loo shukaansado gabdhaha jaceyl loogu abuuro | Gaaloos.com
Home » galmada » qaabka loo shukaansado gabdhaha jaceyl loogu abuuro
Anigu markii hore waxan u malayn jiray in raga hablaha quruxda leh haysta in ay nasiib ku heleen ama ay u qornaydba noloshooda inay helaan gabadh wanagsan.
Ma waxad ka mid tahay dhalinyarada aan hablaha shukaansan karin ee aan galmo helin?
Wali miyanad galmo samayn oo aqoon uma lihid miya sida dumarka loola hadlo mise maba lihid saaxibo wanagsan ama kuwo aad isku fiican tihiin?
Ha warwarin! Isku taxaluji waxyaabaha aad ku wanagsan tahay sida hadii aad kubada ku fiican tahay, ama kaba sii fican; inaad waxbarashada ku fiican tahay oo aad iyada ku dadaashid.
Maadama aanad ku wanaagsanyn shukaansiga hablaha balse aad ku fiican tahay waxbarashada, anigu waxbarashada ku dadaal ayaan ku odhan laha, waayo dhakhtar ayaad noqon kartaa
oo shaqo fiican iyo mushahar wanagsan ayaan shaki ku jirin inaad heli doonto mustaqbalka.
Dabcan aniguna hablaha aad uma shukansan jirin.
Dhibaatadu ma aysan ahayn in aan foolxumahay, dadku badanka waxay odhan jireen in aan ahay qof soo jiidasho leh oo aan waligayba wiil wanagsan ahaa, balse waan ku daalay in aan helo gabadh iyo galmo.
In muddo ah ka dib ayaan ogaaday in qormadan ay tahay su,aashi aan in badan raadinayey jawaabteeda balse aanan waligay helin.
Markaas waxan ogaaday in aqoontu ay tahay awooda. Ama aan si kale u dhigo, in aqoontu ay kuu hohaagimanayso shukaansi iyo in aad galmo hesho.
Khaladaadka ay inamada badankoodu sameeyan aya waxay tahay in ay aaminsan yihin in inta aan wax la samayn in marka hore waxa lasi ogaado wuxu yahay, taasi waa khalad.
Maaha inaad wax walba ogaatid sidii aad gabadh ku heli lahayd, waxad u bahan tahay oo kaliyad inaad hab wanagsan aad qorshaysatid oo hadii uu kuu suurto galo aad hadana talaabada ku xigtid qaadid oo ah hab habkii hore kasii wanagsan.
Hadii aad ku celcelisid sidaas waxa hubaal ah inaad wax walba ogaan karaysid, oo marba habka aad doontid u badali karaysid hadba jawiga ay xaaladu kula marayso.
Marka qoraalkan waxan ugu talo galay qofkii ka weyn 15 jir, oo aan wax khibrad ah u lahayn sida dumarka loo shukaansado ayaan isku dayi doona inaan jiho wanagsan oo midho dhal ah u tilmaamo.
Noqo wiil ay ka muuqato raganimo xad dhaaf ahi.
Dabcan waxad la kulantay inamo badan oo aad ka yaabtay sida dhakhsaha badan leh ee ay dadka usoo jiitaan. Qof kasta waa la saaxiib badankana waxad aragtaa iyagoo qof uun la socda ama la jooga.
Inamadas waxay marka ugu horaysa isu muujiyaan si cajiib leh oo habluhu markay arkaan ay aad uga helaan oo layaab iyo amakaag ku noqota, oo hablihi uu hadalkiiba kasoo bixi kari waayo
quruxda iyo hab dhaqanka wanagsan ee wiilku muujiyay.
Wali ma dareentay hinaase iyo layaab oo ma is tidhi ( waxan rabaa inaan wiilkaas oo kale noqdo)?!
Haddaba warka wanagsan ee aan kuu haya anigu wuxu yahay, haa! waad noqon karta wiilkaas oo kale oo habluhu markasta ka helaan oo soo jiidasho leh, laakin waxa kaa xiga shaqo adag,
istaxalujin, rabitaan iyo dabcan wadada saxda ah oo aad martid.
Marka dadku ay is yidhahdan dadka kale dan haka galin waayo waxba uguma bahnidin, sida hadii wiilku uu yahay taajir ama qof ka dhashay reer lacag leh….wat ever.
Taasi waa mid khaldan! Maxa yeelay waxa jira dad aragtidoodu quruxbadan tahay balse qalbigoodu uusan fiicnayn, iyo dad sidaas kasoo horjeedkeeda ah iyo kuwo labadaba isku haysta.
Marka ugu horaysa waa inaad fahanta in aad naftaada aamintid oo aad isku kalsoonaatid, maxa yeelay hadii aad isku kalsoonaatid oo wax walba aad samaynayso ku kalsoonaatid,
waa markastoo ay wax kuu hagaagaan.
Sidan oo kale ayaa loo hela gabdhaha!
Shantaas xaraf ee yaryar waxay sabab u noqon karaan in nimanka aduunka ugu quruxda badan lehi ay ku guuldaraystaan inay gabadh helaan. Marka hadii aad isu haystao mid khasaaray mar hadii aad ka cabsatid hablaha oo aanad ku dhici karin, ka fikir waligeen hadii aynu rag nahay way dhacday mar in aynu ka cabsano hawenay qurux badan in aynu la hadalno ( xitaa anigana igu dhahoo ).
Cabsidu markasta waxay inaga celisaa wax kasta oo aynu u baahanahay in aynu haysano nolosheena, arrintaasina waxay khusaysa wax kasta oo nolosheena ka mid ah maaha oo kaliyah sidi gabadh
aynu u heli lahayn ama galmo.
Cabsiduna waxay ka mid tahay arrimaha ugu waaweyn ee kala saara nimanka guulaysta iyo kuwa guul daraysta.
Xitaa hadii cabsidu tahay shay aan la iska ilaalin karin oo badanka dadka ku dhacda intay noolyihin….haddana xaqiiqdu waxay tahay: haddii aad la kulantid waxa aad ka cabsanaysid,
cabsidu meesha way ka baxaysaa! Laakin hadii aad ka oradid qofka ama shayga aad ka cabsanaysid, waligaa cabsidu way ku eryanaysaa oo markatsa oo aad ka oradid waa markata oo
cabsidaadu sii weynaato.
Habka kaliyah ee cabsida lagu burburin karo aya waxay tahay inaad cabsida laftirkeeda ka hortimaadid, maxaa yelay nafta kaama qaadayso hadii aad ka hortimaadid balse waxay kaa sii dhigaysaa geesi.
Haddiiba ay dhacdo inaad la kulantid gabadha aad is leedahay la hadal balse aad niyada ka warwartid oo aad is tidhaahdid maye hala hadlin ee iskada, markaas waxa kaa werwersiinaya waa cabsidii kugu jirtay.
Naftaada u sheeg in cabsidu aysan ku maamulin oo aad adigu naftaada maamushid, oo imika iyo wixi ka danbeeya aad adigu is maamushid oo aad la hadashid gabadha aad is leedahay la hadal.
Dadka qaar waxa dhici karta in ay arrinkan u arkaan arrin aad u adag in la sameeyo, laakin aniga i rumayso….. markasta oo aad gabadhi la hadashid oo hadalkiini aad dhamaysataan, waxad noqonaysa qof faraxsan oo aysan cabsi ku jirin, cabsidi aad dumarka ka qabtayna way sii yaraanaysaa uun oo aakhirka waxad is arkaysa adigoo gabadh kasta oo aad is tidhahdid la hadal la hadli kara oo la shekaysan kara.
(2) Jidhka dhis
Ma doonaysa inaad kalsooni naftaada u yeelatid? Sida kaliyah ee kalsooni lagu yeelan karo oo raga badankoodu ka fikiraan ayaa waxay tahay inaad tawabar samaysid oo murqo quruxbadan yeelatid.
Noqo nin raganimo leh (Alpha male).
Sideedaba waxaynu ognahay in habluhu ka helaan raga ay raganimadu ku jirto kana muuqato. Weyna ku beeran tahay dumarka taasi, sida inaga oo rag ah ay inoogu beeran tahay in hadii hawenay ina hor marayso melaha aynu ka eegno ay noqdaan naasaha, futada ama dhinacyada (bistooladaha). Dabeecadaas iskama badali karno, amar ilaahay, dumarkuna iyaguna iskama badali karaan dabeecadaas oo indhaha kama jeedin karaan markay arkayan wiil murqo dhisan leh.
Bilow. Bilow macnahedu waxa weye inaad markasta adigu horaysid. Adigu markasta wa inad noqota qofka wax kasta oo dhacaya u horeeya. Adigu waa inaad toos ugu tagta gabadha oo aad bilawda inaad la haasawdid oo aad la hadashd, halkii aad ka sugi lahayd inay iyadu marka hore kuu timaado oo ay hadalka kaaga horayso.
Tusaalooyin kale oo soo jiidasho leh.
6. Hadii ay gabadhi intay kusoo wacdo ku waydiiso maxad qabanaysa? Waligaa ha ugu jawaabin waxba! Maxa yeelay hadii aad ugu jawabtid waxba oo mar kasta ay kusoo wacdo aad tahay qof diyaar iska ah oo lala hadli karo lana heli karo xili kasta, taas waxa dhici karta in ay dareento gabadhu in aanad ahayn wiil ama nin aan nolol lahayn oo waxba aan qabsan. Hadii ay kusoo wacdo ku dheh mashquul ayaan ahay ee hadhaw ayan kuso wacaya xitaa adigoon mashquul ahayn.
Waayo taasi waxay dhisaysaa xiisaha ay kuu qabto o waxa laga yaaba inay haddana mar labaad kusoow acdo adigoon sioo wicinba.
Kala soco qaybaha soo socda sida hablaha loogala sheekaysto aaladaha internetka sida Facebooka ama mobile text.
Sida loola hadli karo koox hablo ah.
Sida aad naftaada ugu kalsoonaan kartid.
Sida aad booska sxbtinimada uga bixi kartid oo aad shukansan karaysid gabar aad sxb ahaydeen.
Sida loo waydiin karo in aad banaanka isu raacdaan.
Sida aad isugu diyarin lahayd habeenka ugu horeya oo aad bananka isu raaci rabtaan gabar, iyo waxyabah aaad samayn lahayd.
Title: qaabka loo shukaansado gabdhaha jaceyl loogu abuuro